Kuberekwazve kwemunhu mutema - Afrikhepri Fondation
Kuberekwa patsva kwemunhu mutema
Lanoshanda achidzidza munhoroondo nemitauro mukutevera kuna Cheik Anta Diop naThéophile Obenga vane chirevo chisingaverengeki chakaparira kupa humwe humbowo humbowo hwekupokana kwevatema uye kuti awane zvirevo zveProfessor Diop. Asi zvakajeka kuti nhoroondo uye chimiro chemitauro hazvikwanisi kubvira, munhu wese anoziva uye anotaura, kupindira kwemuchena muhupenyu hwemunhu mutsvuku kwakaburitsawo kushungurudzika kwepfungwa uye kukanganisa unhu hwevaKamites.
Ndicho chikonzero, mumaonero edu, nguva yasvika yekuita tsvakurudzo dzepfungwa zvichida kuwedzera rusununguko rwedu kuhutano hwehutano hwepfungwa.
Purogiramu yeBlack Renaissance haifaniri, kana ichida kuzvipa mukana wose wekubudirira, hupfumi hwekurwisana kwekusagadzikana kwepfungwa kunopa maKamites nzira dzakakodzera kuti adzore nhoroondo yavo uye nzvimbo yavo munyika. Vanhu vevanhu.
The reconquest nomurume dema zvechokwadi rusununguko rwake postulates kuti yakawanikwa kushandisa psychart mishonga (yepakutanga unyanzvi kuti anosanganisa mipiro yose psychoanalysis uye uri kurapa) Full kuzvionera kuda kwake vakaparadzaniswa kuda kwemuchena.
Zvakakosha kuti isu tisiye chirwere ichi che stooge uyo anoziva asi anozvibata sekuti akanga asingazivi.
Ngano dzemu Africa uye ngano dzinotaura kuti munguva dzekare takasangana nevarume vachena (semweya) vane vhudzi rakareba uye rakareba uye kuti zvinhu zvinodzungaira dzimwe nguva vaitora vana veMunhu vakatama kubva mumusha ndokuvaunza munyika yavo iri mukati mesango. Ndakagara ndichizvibvunza kuti: chii chinoitika kuvana vatema vakapambwa ava?
"Heartwater inosvika pameso angu" pandinofunga nezvekuguma kwechinhu chaive chinhu Angelo Soliman, murume mutema uyu akashurikidzwa kuputirwa nekuratidzwa mu "Natural History Museum" mune zvimwe zvinoshamisira zvekuda kuziva. kusabhadharwa ”.
Uyu murume aive Freemason aive akabata chinzvimbo cheGrand Master muGerman Lodge iyo "Yechokwadi Kubvumirana" iyo yakaunza pamwechete vakuru veViennese vepamusoro. Pakukumbira kwemwanasikana wemurume uyu, shamwari yaMozart naHaydn, kudzikunura chikwereti chababa vake kuti vamupe kuvigwa zvine runyararo nerunyararo mune Imwe Nyika, kupera kwekusagamuchirwa kwakashorwa.
Moto wakaparadza zvakananga musamuziyamu wakaponeswa kubva pamusiyo mukuru murume akafukidzirwa uye akazarurirwa kune jeers yevashanyi.
Mvura yemoyo inokwira kumeso angu uye handigone kubatsira asi kugadzira kubatana ne "Hottentot Venus": Saartjie Baartman.
Mutema akadzingwa munyika yevarungu ane "ruzivo" rwekusaziva rwekudzoserwa kunyangwe zvake iye panguva dzakaomarara dzehupenyu hwevanhu apo mutorwa aionekwa semuvengi kuti asiyiwe kunyangwe aine chishuwo chekusunganidzwa.
Kubva pakadzika kwehupenyu hwangu, ndisingazive panobuda pfungwa yehama dzangu Anton Wilhelm Amo, Paul Panda Farnana, naOta Benga uye ini ndinozviwana ndichizvibvunza mubvunzo unofira pamiromo yevatema vese vakaputirwa muWest. pane nzvimbo "pakati peVachena" yemumiriri weNigro-Africa yekubatanidzwa?
Ruvengo izvo tsime iri shanje hasha ane simba chaivharidzira mano symbolization uye zvakapoteredza dzoruvengo riri pre-yokubereka hurongwa apo vegetate pasi unokwezva ari mumagaro chinhu ane chinotsiva vakanyoresa ndarama. Saka nekuchiva kuti goridhe chirema mano murume kufananidzira. Dzokuzarura stalemate ari kufora vanhu kune yaro panzvimbo maitiro anofanira kuona mumagaro chinhu pasi ake okutsiva goridhe uye kutumira muchimiro zvayo dzokufananidzira nerokuti (hwezvaizoitika zvinhu) rokusika basa yezvipupuriro zvepangara ndezvezvinhu zveMutauro. Izvozvo ndiyo nzira yekupinda kwemuvengi anovenga munharaunda yekufananidzira ye humanogenic. Psycho-therapy inopa nzira yekubuda musangano re libero-capitalist inotsigirwa nechishuwo chegoridhe.
Vanamai veParis boka repakati repakati, zvinonzi, havana kuzeza kudya hupfu hwaamai hwainge hwakasanganiswa mumuto wavo mukuedza kupfuuridzira hupenyu hwavo, senge chero hupenyu hwakaiswa pasi pechiratidzo chekusagadzikana. Akatarisana neshungu dzerufu, iye asina kurongeka ari munhu "akashungurudzika" uyo asingadzokere shure kubva mukutyisa kwekusvibisa netariro isina tariro yekutiza rufu.
Kuchinja kwenhoroondo yake inosiririsa kwakatungamira mukushandurwa kwemurume mutema kuva muNegro: maitiro ekuora akaenzana neya pharao uyo kubva pachigaro chemubati wezwi (ichi chikafu chakakosha chakabereka vanhu) Shoko pacharo rakava chinhu chekunakidzwa kwakashata kwevatorwa vairamba kutanga. Aya ndiwo mapindiro akaita vanhu nguva yengros: chiratidzo cherufu rweamai vekufananidzira.
Kare vanaFarao haazivi nokunyadzwa yokuva weupfu uye ufungisise ikoko zvimwe aivapo nguva nokudya zvokupara apo nevachena akatonga hallucinating kuti kuziva "kunzwa" vanofanira kudya zvitunha zvevatema zvakachengetedzwa pamakuva nekuti necrophagia ndiyo "kukanganisa" kwegrophy.
Ruvengo ndirwo runopatsanura nekupokana nehunhu hwerudzi rwevanhu rwakaparadzaniswa muNhema neMuchena. Chokwadi pakatanga "chena" chena pane vatema vatendeuka kana maalbino avo vakatamira kumatunhu ane hyperboreal kuti vatize kupisa kwezuva reAfrica rinovaisa kune mamwe maratidziro. MaAlbino saka vakatizira kumatunhu ane hyperboreal uko kwavaizoziva mamiriro ekunze anotonhora emakomo echando chisingaperi. Vawira pasi kubva kuCharybdis muSylla, ko sei vazukuru ava vemaAlbino vakatapwa vangadai vasina kunzwa kwekutambudzwa izvo zvakavapinza mumupengo wekunyepedzera we "rudzi rwakakwirira" kuripa nhamo yavo? Chirwere chakajairika chevanhu saka chinosvika pakuve paranoia iyo kurapwa kwepfungwa nemushonga kwakakodzera. Uyezve, izvozvi zvave kuratidzwa kuti pakupera kwekukonana pakati peNéanthertaliens naHomo sapiens
pane kuve nekunyengera kwokuti DNA inotakura nzira. Rudzi rwakajeka nderokufungidzira kwemugari weAmerica akaita chiitiko chinosuruvarisa: achida kuumba sangano revatsvene vechokwadi iye akarayira kuongorora kweDNA ayo zvaizozobudiswa kwaari paTV. Chii chakaitwa. Vachivhiringidzika pachena pamusoro pehutsanana hwemadzinza ake, uyu mushushi ane chisarudzo, maererano nevenhau, akazviuraya.
Mufungo wakanyatsonzwisiswa wekutangisa unoita murume wechinyakare kuva "wekushushikana" izvo zvinozadzisa magumo azvo ekuva munzanga chete kuburikidza nekufananidzira kukandwa uye kubayiwa kweIzwi nashe kutanga. Iyi ndiyo mamiriro anodikanwa ekujekeswa kweiyo imago musimboti weiyo humanogenic kurongeka kwekuve kwekutyaira. Iyi poindi yakakosha mukuvakazve kwevanhu mushure mehondo, vakaburitswa nguva dzese, haina kukwidza hana yehukama yaGeneral de Gaulle, uyo asina kubvunza mubvunzo wekuti chii chingave chekuda zvehondo mushure meChipiri Hondo Yenyika. iyo yaakarima mumauto uye mune munhuwo zvake (paakaraira vekare kuti vadzokere kumabasa avo ekare) Zvinonakidza kucherechedza kuti dare reNuremberg pacharo rakanzvenga mubvunzo wemagumo echishuwo chakaburitswa .
Zviripachena kuti izvi zvishuwo hazvina kubviswa nehusiku humwe nekuda kwekuguma kwenyika yekurwa uye kupomedzerwa "mhosva dzakanangana nevanhu": hapana mubvunzo vakawana hutiziro pakati pevanhu uye vatungamiriri vayo uye zvinotenderwa kufungidzira kuti ivo vari kumavambo easociable-kugarisana kwemunhu uye nezvezvaanofarira kuhondo zvinogara zvichikurudzira.
Zirignon Grobli, Psychoanalysis, painted and psycho-therapist
Uchapupu hwezvokuchera matongo hunoratidza kuti Hannibal akanga ari mutema
Mukutsvaga kweChinangwa - Chinyorwa (2015)
Divine Matsenga: Izvo Zvinomwe Zvitsvene Zvinheyo zvekuratidzwa - Doreen Virtue (Audio)
Gluthation, an antioxidant iyo inokurudzira maitiro ezvirwere zvemuviri uye inogadzirisa muviri
Beyond the cut the cut